Sidee Dadka Reer Somaliland Doorashada 20015 Xisbiyada Uu Kala Taageeri Una Kala Codeyn Doonan? | Somaliland Today
← Qiimaha Lagu Sameeyo Baasaaboorka Cusub Ee Somaliland Oo Ka Qaalisan Baasaaboorrada Maraykanka Iyo Ingiriiska & Doodda Laanta Socdaalka
Hambalyo Ku Socota Idiris Makiinad Dooxajoog & Ismahaan Cabdiraxmaan Maxamed (Fargeeto ) →
Sidee Dadka Reer Somaliland Doorashada 20015 Xisbiyada Uu Kala Taageeri Una Kala Codeyn Doonan?
Markaa hore wa wax ilaahay loogu mahadnaqo dalkeeni oo nabadoon xor ah sii wadannimo iyo qaranimo leh doorasho ugu dareerno. Sanadka cusub ee 20015 bisha June sidaa laga war-qabo gudida doorashooyiinka qarankuna qallinka ugu duugii doonan todobaadan inoogu soo fool leh.
Waa doorasho leh xiiso iyo xamaasad olollee siyaasadeed dabcan loona baahanyahay in cid waliba xilkeeda iyo wajiibaadkeeda muwaadiinimo uga soo baxdo lana wada ilaalliyo xasiloonida nabadgelyada dadkeena iyo dalkeena hoyo. Oo ah dal yar hadana nimco iyo khayraad dabeeci ah ilaahay’ geliyeey cadow badan’na leh shisheeye iyo qaar magaca guud iyo diirka aynu isaga eegnahay.
Wa inaan dadkayga reer Somaliland xasuusiiyo cadowgooda jecel burburkooda isku dhac iyo xasilooni darro ka dhacda Jamhuuriyadda yar ee qaniga ah shacabkeena fiirada dheer ee gobta ah cid walba oo Soomaali ahna la jecel wanaag nabadgelyo derisnimo gacalnimo. Baal aan hada ba hoos ugu da-dego ujeedada maqaalkaygan ku cabiiro odorso saadaasha fikradeyda ku saabsan taageerada iyo u kala codeynta Xisbiyada qaranka Somaliland Kulmiye, Wadani, iyo Ucid, oo musharraxiintoodu ukala horoorsan doonan helida iyo hanaashada taageerada shacabweynaha Somaliland. Bari ila galbeeda miyi iyo magaaloo dibad iyo gudaba dalkeena.
Dadweynaha reer Somaliland nasiib wanaag khibrad, iyo waayo -aragnimo libaaxnimo wey u leeyihiin nidaamka tartanka dimoqraadiga ee doorashooyiinka laakiin doorkan musharaxiinta madaxweynimada doorashada madaxtooyada iyo tii golaha baarlamaanka iyaa isku mar loo codeynayaa iskuna soo beegmay kolay waxay leedahay culus gaar ah iyo cilado farsamo kala mareynta iyo shaandhaynta codadka Xibiyada iyo xildhibaanadu kukala guulaysan doonan. Hawl kale oo aad u xasaasi ah kala doorashada musharaxiinta madaxweynimo ee sedexda Xisbi ee qatanka.
Aan ugu horreeyo musharax madaxweyne Axmed Siilanyo oo taariikhdiisa iyo sooyaalkiisa dheer ee siyaasadeed ka wada dheregsanahay oo marlabaad u tartamaya madaxweynimadJamhuuriyadda, Somaliland.
Waxaa loogu kalsooni qaba inuu heli doono kana guulaysan doono musharaxiinta kale ee u tartamayaa Xisbiyada mucaaridka Waddani iyo Ucid.
Sabaabto ah mudadi u xilka hayeey oo hada laga joogo afar sano iyo baadh wuxuu qabtay horumar wax ku ool ah Waxbarasho dib dhis qaran ilahii halbowlaha dhaqaalle dalkeena hormuud ka tahay Dekada calaamiga ah ee Berbera Port International.
Beeraha iyo wax soo saarka dowladda Siilanyo maalgelisay iyo weliba xoolo dhaqatada reer Somaliland oo mashruucyo iyo adeeg cafimaad oo heer ah loo sameeyeeey oo aan anigu markii aan dalkii booqday indhaaheyga kusoo arkay.
Laakiin kolay Xisbiga Kulmiye lagama yaabo inuu cod aad u tiro badan sidii doorashadii hore kusoo baxo dhowr arrimood dartood dil-dilaaci iyo dhawaaci siyaasadeed ee Xisbiga talada hayaa ka dhex alsoona ila Gudoomiye Muse Bixii cabdi ka tanaasuulay damciisi madaxweynimo halkaas waxaa Kulmiye kasoo gaadhay taageerayaashiis oo Gudoomiyaha Xisbiga talada Kulmiye Kornayl Muse Bixii ka biiyo diiday taageeradii muga iyo baxaada weynd kala noqoday.
Siiba garabkii Muse Bixii iyo taageerayaashii tabacsana raacsana oo qaarkooda u dego-rogtay mucaaridka cadhoo mucaaridnimo ka qaadeen sidaa hamigii iyo damacii Muse u burburay.
Xisbiyada mucaaridka musharaxiintooda madaxweynimo Waddani Gudoomiye Cabdiraxman Cirro isla mrkaas ahna gudoomiyahii golaha barlamaanka ee sharci dejiinta wuxuu kasoo dego-rogtay Xisbiga Ucid kuna wacad furay taageeroyaal kala soo duday ku dhawaaqay Xisbiga Waddani oo weli yeelan shirweyne is xor ah loogu doorto musharax madaxweyne
Ucidna la mid ragga Axmed Siilanyo la tartamayaa waa Jamal Cali Xussen iyo Cabdiraxmaan Cirro oo aan sifo sharci oo dimqoraadiyeed gudaha Xisbiyadooda uga sharaxnayn.
Baal aynu eegno fiirno looga kala taageeri doono seddexda Xisbi ee qaran iyo gobolada dalka June 20015 Xisbiyada mucaaridka ah iyaa taageeradoodu tahay arrimo xasaasi ah beel diid xamaasad qabiil doorweyn ku leh doorashadan waxay mucaaridku taageerada beelaha gobolada oo idil la qabsan doono Xisbiga talada ee Kulmiye Togdheer oo laga yaabo in loo kala codeeyo bari iyo galbeed.
Hargeysa: Caasimadda Somaliland seddexda Xisbi ee qaran weyku hirdimi doonan Borame iyo Berbera la mid cod qeybis Ceerigaabo: cod qeybis vote share, dadka mucaaridka codeynayaa iyaa codeyntooda loogu tilmaama aargoosi siyaasadeed cadho wasiir la eryey ka ka kacday ama shakhsi diid loona yaqaano protest vote,,
Kulmiye: Party 39,2 %